Maxay Ahayd Farriintii Uu Mikel Arteta U Diray Pep Guardiola Kaddib Guushii FA CUP? - Gool24.Net
Maxay Ahayd Farriintii Uu Mikel Arteta U Diray Pep Guardiola Kaddib Guushii FA CUP?
Tababaraha Arsenal ee Mikel Arteta ayaa farriin u cajiib ah u diray Pep Guardiola kaddib markii ay kooxdiisu ku guuleysatay FA Cup, iyada oo 2-1 ku garaacday Chelsea.
Arteta ayaa gacanyare usoo ahaa Guardiola muddo saddex sannadood ah oo ay wada joogeen Manchester City ka hor intii aanu bishii December noqon tababaraha Arsenal oo uu ka beddelay Unai Emery oo la caydhiyey markii uu kooxda dhinacna u wadi kari waayey.
Muddadii uu Arteta ku-xigeenka u ahaa Guardiola, waxay City ku guulyesatay shan koob oo waaweyn oo uu ku jiro FA Cup oo xili ciyaareedkii hore ay hanteen, laakiin markan isaga ayaa wareeggii semi-finalka kusoo reebay naadigiisa hore iyo macallinka uu gacanyaraha usoo ahaa.
Markii ay kooxdiisu guusha ka gaadhay Chelsea ee ay dhamaysatay dabbaal-degga Koobka, Arteta ayaa farriin u diray Pep Guardiola oo uu tilmaamay inuu ka dhigay qofka uu maanta yahay, khibraddii uu ka helayna ay caawisay inuu guushan gaadho.
Sidoo kale waxa uu farriin u diray qoyskiisa oo uu xusay inay ka fog yihiin, waxaanu yidhi: “Waxaan aad u tebay qoyskaygii mar walba i garab taagnaan jiray. Sidoo kale waxaan si weyn ugu mahad celinayaa Pep sababtoo ah waxaan tababare ka ahay koox weyn isaga dartii, sidaas darteed, waa inaan isagana tixgelin siiyo.”
Arteta waxa uu sheegay in Pep Guardiola uu saamayn badan kusoo lahaa noloshiisa illaa yaraantii, waxaanu yidhi: “Hagaag, Guardiola aniga saamayn ayuu igu lahaa illaa markii aan 15 jirka ahaa oo aanu ku kulanay Barcelona labadayada oo ciyaartoy ah. Waayahayga tababarenimo iyo noloshayda shaqsiga ahba, saamayn weyn ayuu igu leeyahay.
“Haddii aan ka hadlo shaqsiyaddiisa, qiimihiisa, sidii uu iila dhaqmi jiray iyo sidii uu ciyaartoyda iyo shaqaalaha ula macaamili jiray, waxay ahayd mid cajiib ah.
“Tababare ahaan, wax badan ayaan ka bartay, waxaanu wada qaadanay waqti heersare layaab lahaa oo qaarkood adkaayeen, laakiin khibradda aan ka helay intii aan garabkiisa joogay ayaa heersare ahayd.”